Ngokuvamile, abazali abaningi uqaphela ukuthi ingane has abafundi ezahlukene obujwayelekile. Nakuba kubukeka engajwayelekile futhi kubonakala kwabanye sina ukuphambuka ukukhathazeka ngokuvamile obakhathalelayo.
Lesi senzakalo ngokuthi anisocoria. Umahluko kulokho abafundi kungaba zasezindaweni ezihlukahlukene, kodwa kuhle kakhulu ukuthi anisocoria kakhulu ubuntu bokuphila. Lokhu kusho ukuthi abafundi zihlukile for lungene 1 mm, futhi kungakhathaliseki ekukhanyeni noma ebumnyameni, ubheka kubo. Uma abafundi ukushintsha ubungako bawo, kuba anisocoria sokugembula, futhi lapho kakade kufanele sikhathazeke ngalutho.
Ezahlukene abafundi obujwayelekile - yimbangela ejwayelekile kakhulu.
Okokuqala. Anisocoria kungenziwa ngofuzo. Uma othile emkhayeni wenu lapho, khona-ke akukho isizathu sokukhathazeka - kuba kofuzo ukuthi ayiyona ingozi. Futhi, cela izihlobo zofunda kangakanani ukuphila futhi ungagxambukeli.
Okwesibili. Wonke umuntu uyazi ukuthi abafundi basabela ukukhanya: ukukhanya okwengeziwe, le iyincane umfundi (sici ukuphepha, ivikela amehlo ethu yokushayiswa emisebeni eyingozi). Uma imisipha esilawula ukunwetshwa umfundi, ayisebenzi kahle, khona-ke singazuza ukugcina anisocoria.
Okwesithathu. Uma usebenzisa iso amaconsi, kungase futhi kuholele izinguquko usayizi umfundi. Noma yimuphi umuthi ongena iso, kusithinta ngezindlela ezingafani kuye. Izidakamizwa for somoya, isifutho kanye nezinye izinto azithandeki kuleli cala.
Okwesine. Ukuvuvukala noma umfundi esweni, omunye ukushintshashintsha kulo mkhakha. Optic ukulimala kwenzwa okungadingi kuniketwe imininingwane ngekusebenta ukushuba yokucucuza ukukhanya bengena iso.
Wesihlanu. abafundi ezahlukene obujwayelekile kungase kube uphawu lokungabi kokunqotshwa kwe ama- cerebral kanye / noma ubuchopho stem, ungase futhi ifakazela ukwephulwa emgogodleni kanye nezinye izinkinga kule ndawo.
Sixth. Yiqiniso, ngeke sikwazi ukuba 100% ukuthi ukuthi umehluko usuthole akulona ukucindezeleka kwangemva kwenhlekelele. Ingane yena angase bazibeka noma hit ngephutha hit into blunt (isifo iqala ukuthuthukisa ngemva lashayisa eqinile sesifiphele). Zonke impilo yengane ayikwazi ukulawulwa, ngakho xhumana nodokotela.
Uma ingane has abafundi lobehlukene, uyakumlobela uhlole udokotela, okuyinto kuyokwembula Imbangela sifo, ngenxa yokuthi isibalo sabo omkhulu. Sifo ngokwalo cishe ayinakwenzeka. Ingabe akazibekanga medicate usebenzisa imithi yendabuko - kungcono akunjalo! Ekukhunjulwa kuyabiza kakhulu ngaphezulu! Ikakhulukazi, ngokuvamile kuwuphawu nezinye pathologies. Uma isikhathi ukuqaphela abafundi ezahlukene ingane, izinkinga eziningi eziyingozi kungagwenywa.
Anisocoria ngezinye izikhathi zihambisana ukuhlukumeza umsebenzi ezibukwayo: izithombe babe esilufifi, kungase kube umbono double, unga kakhulu amehlo amnyama. Uma uphelelwa lo mbuzo, khona-ke ungalahlekelwa umbono ngokuphelele. Ukucanuzela kwenhliziyo, ukuhlanza kanye nesiyezi nazo ngokuvamile ehambisana nobutha anisocoria.
Kuthiwani uma abafundi ezahlukene obujwayelekile?
Into ebaluleke kakhulu ngazo zonke izifo esweni - ukuya kudokotela wamehlo okunethiwethi. Lotions kusukela chamomile kulokhu kungasizi. Uma kungatholakali ngokushesha ukuthi uphethwe udokotela asisho aphumelele, khona-ke kuyomelwe ukuba iphumelele ekuhlolweni eziningana. Nalapha futhi, anisocoria kungase kube uphawu yokugula kakhulu kakhulu, ngakho uyayekela kwezifo khulula-ebhukuda yingozi.
Ukuhlola kungase kuhlanganise: igazi cerebrospinal fluid, uzoba ezinhle ikhanda CT wokuthi yadalwa ukuvela anisocoria ngenxa yezinkinga ubuchopho, Bheka, i-MRI,-X-ray entanyeni.
Thola imbangela sesifo, kwenza udokotela imithi yokwelashwa (cishe kunazo esibhedlela). Qedela Inkambo yokwelashwa ngokwezinjongo ezinhle nangesimo sengqondo ngokucophelela maqondana nempilo yabo.
Impilo - yilokhu sisinikwa unomphela ukuphila, ukumnakekela.
Umculi British Aleks Terner: Biography, umsebenzi nomkhaya
Cascade nge esiphongweni ku izinwele ezinde (isithombe). Cascade izinwele ezinde esiphongweni etshekile